"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D"
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 6 ọnwa gara aga #891
Ndewo ... M etinyere faịlụ dị n'elu n'ime P3Dv4 mana ngwa anaghị arụ ọrụ,
M arụnyere akpaaka ma gbalịa ịwụnye akwụkwọ.
Cheers Olileanya na ụfọdụ ahụ nwere ike inyere aka
KWESỊTA NDỊ MMADỤ MAYBE KWESỊRỊ MGBA M GA-AGBA ỊNỤRỤ
Nsogbu edozi nsogbu
Ndumodu ikpe azu: site bobrad79.
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1065
Ezi ehihie, otu:
Ọ ga-amasị m ịjụ maka mmalite engine na ụgbọ elu a, n'ihi na mgbe ọ bụla m malitere ya, engines na-enye ike zuru ezu maka ihe dịka 10 nkeji, n'agbanyeghị na Power Levers nọ n'ọnọdụ na-adịghị mma, yana Ọnọdụ Levers (nku).
M (doro anya) anaghị eme ezigbo usoro ịmalite, mana usoro ndị sitere na PDF nke addon.
Nwere olileanya na ị nwere ike inyere m aka.
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1066
Buru ụzọ gbochie usoro nchedo ịntanetị, wee degharịa usoro ihe omume. Mee ka m mata ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1084
Emeela, ma ọ dịghị arụ ọrụ ...
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1085
Ọ dị mma, m ga-ebudata mega mkpọ a P3D V4 ma lee ihe dị na otu esi edozi ya. M ga-eso gị lọta
Ndumodu ikpe azu: site DRCW. Ihe kpatara ya: Mgbanwe FSX na P3D V4
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1086
Mgbe m na-ebudata ngwanrọ a, achọpụtara m na ihe ọgụgụ ahụ, na enwere gọvanọ odo odo akpọtụrụ na kọlụm ngagharị, nke ahụ agaghị enye gị ohere ịga karịa 10% nke N1. Gọvanọ a ga-anọrịrị n'oge mmalite ma gbatuo na steepụ. N’iche na ị maara nke a, ma na-agbaso usoro a, nke a nwere ike ịbụ ebe njehie dị na nzuzo. Jide gị ide
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1087
Ọ dị mma, elerela m n'ụgbọelu ahụ, ma nsogbu a bụ nsogbu nzuzo karịa n'etiti ogwe ndị na-ekwu okwu 2D na njirimara gọvanọ. Will ga-achọpụta na gọvanọ bụ naanị na 2 D pop up panel, ọ bụghị na kobere kobere. Mgbe a na-amalite, njikwa mmanụ ya na-ada. Esemokwu dị ebe a n'etiti ogwe aka na 2D. Ha anaghị egwu egwu. The mebere panel metụtara na ndabara eze ikuku na P3D. M ga-eme ụfọdụ na-egwu egwu gburugburu ma hụ ihe m nwere ike ime
"Emiko EMB-120 Mega FSX & P3D" 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1088
Ndewo, ebudatala m ngwungwu a na FSX. N’eziokwu, echere na nke a bụ otu n’ime nbudata kachasị mma nke ebudatarala m! Onweghi oke nke okpoko ojoo, na nkochi ichochi onu ogugu (2D panel, guires etc) di egwu. Rikooo mere nke ọma!
Oge ike page: 0.332 sekọnd